खुसिको खबर ! निर्मला पन्तको ह’त्यारा पत्ता लाग्यो, सार्वजनिक गर्दै नेपाल प्रहरी - nepal day
खुसिको खबर ! निर्मला पन्तको ह’त्यारा पत्ता लाग्यो, सार्वजनिक गर्दै नेपाल प्रहरी
प्रकासन मिति : २० पुष २०७८, मंगलवार १२:४२
काठमाडौं, । कञ्चनपुरमा ३ वर्षअघि निर्मला पन्त ह’त्याका एक सं’दीग्ध पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले ती व्यक्तिलाई भारतबाट प’क्राउ गरिएको बुझिएको छ ।
प’क्राउ पछि १५ दिनअघि नै नेपाल ल्याइएका भारतीय नागरिक निकाल अलीबारे वृस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बुझिएको छ । ह’त्यामा उनको सं’लग्नता लगभग निश्चित भएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
डिएनए परीक्षण भइरहेको र मिलेमा उनलाई सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । निकाल अली निर्मला पन्त ह’त्या भएको ठाउँ नजिकै तरकारी खेतीमा लागेको बताइएको छ । ह’त्यामा उनी संलग्न भए नभएको निक्र्यौल गर्न प्रहरीले तथ्यहरु खोजेको र डिएन रिपोर्टमा भर परेको बुझिएको छ ।
निकार अलि कञ्चनपुर स्थित निर्मला पन्तको ह’त्या भएको ठाउँ नजिकै तरकारी खेती गर्थे । जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । डिएनए नमिलेसम्म उनलाई सार्वजनिक नगरिने बताइएको छ ।
कञ्चनपुरका एसपी उमा प्रसाद चतुर्वेदीले अनुसन्धान जारी रहेको र आधिकारीक प्रमाण आइनसकेको बताए । उनले भने–‘सोधपुछका लागी ल्याउने लैजाने कुरा भइरहन्छ, हामी गहिरो अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ यसअघि प’क्राउ गरिएका दिलीपसिंह विष्टको डिएनए नमिलेपछि उनलाई रिहा गरिएको थियो ।
१० साउन २०७५ मा कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको ह’त्या भएको थियो । उनी साथीको घरमा पुगेर फर्कदै गर्दा ब’ला’त्कारपछि ह’त्या भएको थियो ।